Electro-Sonication - Ama-electrode e-Ultrasonic
I-Electro-Sonication iyinhlanganisela yemiphumela kagesi nemiphumela ye-sonication. I-Hielscher Ultrasonics ithuthukise indlela entsha nenhle yokusebenzisa noma iyiphi i-sonotrode njenge-electrode. Lokhu kubeka amandla e-ultrasound ngqo kusixhumi esibonakalayo phakathi kwe-ultrasonic electrode noketshezi. Lapho ingakhuthaza i-electrolysis, ithuthukise ukudluliswa kobuningi, futhi yephule izingqimba zemingcele noma idiphozi. I-Hielscher inikezela ngemishini yebanga lokukhiqiza yezinqubo ze-electro-sonication kuzinqubo ze-batch ne-inline nganoma yisiphi isilinganiso. Ungahlanganisa i-electro-sonication ne-mano-sonication (ingcindezi) ne-thermo-sonication (izinga lokushisa).
Izicelo ze-Ultrasonic Electrode
Ukusetshenziswa kwe-ultrasonics kuma-electrode ubuchwepheshe obunoveli obunenzuzo ezinqubweni eziningi ezahlukahlukene ku-electrolysis, i-galvanizing, i-electro-purification, i-hydrogen generation ne-electro-coagulation, i-particle synthesis noma enye i-electro-chemical reaction. I-Hielscher Ultrasonics inama-electrode e-ultrasonic atholakala kalula ocwaningweni nasekuthuthukisweni esikalini selab noma i-pilot scale electrolysis. Ngemuva kokuhlola nokwenza ngcono inqubo yakho ye-electrolytical, ungasebenzisa i-Hielscher Ultrasonics usayizi wokukhiqiza imishini ye-ultrasound ukukala imiphumela yakho yenqubo kumazinga wokukhiqiza wezimboni. Ngezansi, uzothola iziphakamiso nezincomo zokusetshenziswa kwama-electrode e-ultrasonic.
I-Sono-Electrolysis (i-Ultrasonic Electrolysis)
I-Electrolysis ukushintshana kwama-athomu nama-ions ngokususwa noma ukufakwa kwama-electron okuvela ekusetshenzisweni kwamandla kagesi. Imikhiqizo ye-electrolysis ingaba nesimo esihlukile somzimba kusuka ku-electrolyte. I-Electrolysis ingaveza izinto eziqinile, njengezintaba noma izingqimba eziqinile kunoma yimaphi ama-electrode. Ngenye indlela, i-electrolysis ingakhiqiza amagesi, njengeHydrogen, iChlorine noma i-Oxygen. Ukuxokozela kwe-Ultrasonic kwe-electrode kungaphula imali eqinile evela ebusweni be-electrode. I-Ultrasonic degassing ikhiqiza ngokushesha amabhamuza amakhulu egesi kusuka kumagesi ancibilikisiwe ama-bubble amancane. Lokhu kuholela ekwehlukanisweni okusheshayo kwemikhiqizo enegesi kusuka ku-electrolyte.
I-Ultrasonic UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz) njenge-Cathode kanye / noma i-Anode kuseli le-Electrolytic
Ukudluliswa Kwemisa Okudlulisiwe kwe-Ultrasonically ku-Electrode Surface
Ngesikhathi senqubo ye-electrolysis, imikhiqizo iqoqa eduze kwama-electrode noma ngaphezulu kwe-electrode. Ukuxokozela kwe-Ultrasonic kuyithuluzi elisebenza kahle kakhulu lokwandisa ukudluliswa kwesisindo ezingqimbeni zemingcele. Lo mphumela uletha i-electrolyte entsha lapho ixhumana khona ne-electrode surface. Ukusakazwa okuhamba phambili kuthutha imikhiqizo ye-electrolysis, njengamagesi noma okuqinile kude ne-electrode surface. Ukwakheka okungavimbeleki kwezendlalelo ezihlukanisayo ngakho-ke kuvinjelwe.
Imiphumela ye-Ultrasonics Ekungeneni Kokubola
Ukuxokozela kwe-Ultrasonic kwe-anode, kwe-cathode, noma womabili ama-electrode, kungathinta amandla okubola noma amandla okubola. I-Cavitation iyodwa yaziwa njengokwephula ama-molecule, ikhiqize ama-radicals amahhala noma i-ozone. Ukuhlanganiswa kwe-cavitation ne-electrolysis ku-electrolysis eyenziwe ngcono nge-ultrasonically kungathinta umthamo omncane odingekayo phakathi kwe-anode ne-cathode yeseli le-electrolytic ukuze i-electrolysis yenzeke. Imiphumela yemishini ne-sonochemical ye-cavitation ingathuthukisa ukusebenza kahle kwamandla kagesi, futhi.
I-Ultrasound ku-Electrorefining naku-Electrowinning
Ngenkathi yokwenza i-electrorefining, amadiphozi aqinile ezinsimbi, afana nethusi angaguqulwa abe ukumiswa kwezinhlayiya eziqinile ku-electrolyte. Ku-electrowinning, okubizwa nangokuthi i-electroextraction, ukubekwa kwe-electrodeposition yensimbi kusuka kuma-ores abo kungaphendulwa kube ukuqina okuqinile. Izinsimbi ezivamile ze-electrowon zihola, ithusi, igolide, isiliva, i-zinc, i-aluminium, i-chromium, i-cobalt, i-manganese, nezinsimbi ezingavamile zomhlaba nezama-alikhali. I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokufakwa kwe-ores, futhi.
Ukuhlanzwa Kwe-Sono-Electrolytic Ketshezi
Hlanza uketshezi, isb. Izixazululo ezinamanzi njengamanzi angcolile, udaka noma okufanayo, ngokuhola isixazululo ngomkhakha kagesi wama-electrode amabili! I-Electrolysis ingabulala amagciwane noma ihlanze izixazululo ezinamandla. Ukondla isixazululo se-NaCI kanye namanzi ngama-electrode noma ngama-electrode wonke, kukhiqiza i-Cl2 noma i-CIO2, engaxhuma ukungcola futhi igodle amanzi noma izixazululo ezinamandla. Uma amanzi aqukethe ama-chloride emvelo anele, asikho isidingo sokwengeza.
Ukudlidliza kwe-Ultrasonic kwe-electrode kungathola ungqimba lomngcele phakathi kwe-electrode namanzi abe mncane ngangokunokwenzeka. Lokhu kungathuthukisa ukudluliswa kobuningi ngama-oda amaningi wobukhulu. Ukudlidliza kwe-ultrasonic kanye ne-cavitation kunciphisa ukwakheka kwamabhamuza amancane ngenxa ye-polarization, kakhulu. Ukusetshenziswa kwama-electrode e-ultrasonic e-electrolysis kuthuthukisa inqubo yokuhlanzwa kwe-electrolytic kakhulu.
I-Sono-Electrocoagulation (i-Ultrasonic Electrocoagulation)
I-Electrocoagulation iyindlela yokwelashwa kwamanzi angcolile yokususa ukungcola, njengamafutha we-emulsified, inani eliphelele le-petroleum hydrocarbon, i-organic refractory, i-solid solid, nezinsimbi ezisindayo. Futhi, i-ion enemisebe ingasuswa lapho kuhlanzwa amanzi. Ukwengezwa kwe-ultrasonication electrocoagulation, okwaziwa nangokuthi i-sono-electrocoagulation, kunomthelela omuhle ekufunweni kwamakhemikhali e-oxygen noma ukusebenza kahle kokususwa kwe-turbidity. Izinqubo zokwelashwa ezihlanganisiwe ze-electrocoagulation zikhombise ukusebenza okwenziwe ngcono ekususweni kokungcola emanzini angcolile ezimboni. Ukuhlanganiswa kwesinyathelo sokukhiqiza esikhululekile samahhala, njenge-ultrasonic cavitation ene-electrocoagulation kukhombisa ukusebenzisana kanye nokwenza ngcono kunqubo yonke yokuhlanza. Inhloso yokusebenzisa lezi zinhlelo ze-ultrasonic-electrolytic hybrid ukukhulisa ukwelashwa okuphelele nokuqeda ukungalungi kwezinqubo zokwelashwa ezivamile. Iziphenduli ze-Hybrid ultrasonic-electrocoagulation zikhonjisiwe ukuthi zingasebenzi i-Escherichia coli emanzini.
I-Ultrasonic UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz) njenge-Sono-Cathode kanye / noma iSono-Anode eTank
Isizukulwane Sono-Electrolytic In-Situ samaReagents noma amaReactants
Izinqubo eziningi zamakhemikhali, njengokuphendula okungafani noma i-catalysis iyazuza ekuyalukeni kwe-ultrasonic naku-ultrasonic cavitation. Ithonya le-sono-chemical lingakhuphula isivinini sokuphendula noma lithuthukise isivuno sokuguqulwa.
Ama-electrode akhathazekile e-Ultrasonically engeza ithuluzi elisha elinamandla ekuphendukeni kwamakhemikhali. Manje usungahlanganisa izinzuzo ze-sonochemistry ne-electrolysis. Khiqiza i-hydrogen, i-hydroxide ions, i-hypochlorite namanye ama-ion amaningi noma izinto ezingathathi hlangothi ngqo emkhakheni we-ultrasonic cavitation. Imikhiqizo ye-electrolysis ingasebenza njengama-reagents noma njengama-reactants ekuphenduleni kwamakhemikhali.
Ama-reagents ayengezwa ukudala ukusabela kwamakhemikhali noma ukuhlolwa uma kwenzeka eyodwa. Ama-reagents awadliwe ukusabela kwamakhemikhali.
Ama-reactants yizinto zokufaka ezibamba iqhaza ekuphenduleni kwamakhemikhali. Ama-reactants asetshenziswa ukwenza imikhiqizo yokusabela kwamakhemikhali
Inhlanganisela ye-Ultrasound nePulsed Electric Field
Inhlanganisela yenkambu kagesi eshaywayo (PEF) ne-ultrasound (US) inemiphumela emihle yokukhishwa kwamakhemikhali e-physicochemical, bioactive kanye nokwakheka kwamakhemikhali kokukhishwayo. Ekukhishweni kwama-alimondi, ukwelashwa okuhlanganisiwe (i-PEF-US) kukhiqize amazinga aphakeme kakhulu ama-phenolics aphelele, ama-flavonoid aphelele, ama-tannins we-condense, okuqukethwe kwe-anthocyanin nomsebenzi we-antioxidant. Kwehlise amandla nokukloloda kwensimbi.
I-Ultrasound (i-US) nenkambu kagesi eshaywayo (i-PEF) ingaqashwa ithuthukise ukusebenza kahle kwenqubo kanye namanani wokukhiqiza kuzinqubo zokuvutshelwa ngokwenza ngcono ukudluliswa kwesisindo nokutholakala kwamaseli.
Inhlanganisela yenkambu kagesi eshaywayo kanye nokwelashwa kwe-ultrasound kunomthelela ekomiseni umoya kinetics kanye nekhwalithi yemifino eyomisiwe, njengezinqathe. Isikhathi sokomisa singancishiswa ngama-20 kuye kuma-40%, ngenkathi kugcinwa izakhiwo zokuvuselela amanzi.
I-Sono-Electrochemistry / i-Ultrasonic Electrochemistry
Faka i-electrolysis eyithuthukisiwe nge-ultrasonically ukukhiqiza ama-reactants noma ukusebenzisa imikhiqizo yokuphendula kwamakhemikhali ukuze uhambise ukulingana kokugcina kokuphendula kwamakhemikhali noma ukuguqula indlela yokusabela yamakhemikhali.
Ukusetha okuphakanyisiwe kwama-Ultrasonic Electrode
Idizayini entsha ye-isolator yohlobo lwe-probe-ultrasonicators iguqula i-sonotrode ejwayelekile ye-ultrasonic ibe yi-electrode edlidliza ngokukhalipha. Lokhu kwenza i-ultrasound yama-electrode ifinyeleleke kalula, kube lula ukuyihlanganisa futhi ikhule kalula emazingeni okukhiqiza. Eminye imiklamo yaphazamisa i-electrolyte phakathi kwama-electrode amabili angasebenzi, kuphela. Amaphethini wokusabalalisa amagagasi e-Shadowing ne-ultrasound akhiqiza imiphumela engezansi uma iqhathaniswa nokuxokozela okuqondile kwe-electrode. Ungangeza ukudlidliza kwe-ultrasound kuma-anode noma ama-cathode, ngokulandelana. Vele, ungashintsha i-voltage kanye ne-polarity yama-electrode nganoma yisiphi isikhathi. Ama-electrode we-Hielscher Ultrasonics kulula ukuwafaka kabusha kuma-setups akhona.
I-Sono-Electrolytic Cell ne-Electrochemical Reactors ezivaliwe
I-seal-tight seal phakathi kwe-sonotrode ye-ultrasonic (i-electrode) kanye nesitsha se-reactor siyatholakala. Ngakho-ke, ungasebenzisa iseli le-electrolytic ngaphandle kwengcindezi ye-ambient. Inhlanganisela ye-ultrasound nengcindezi ibizwa ngokuthi i-mano-sonication. Lokhu kungaba nentshisekelo uma i-electrolysis ikhiqiza amagesi, lapho isebenza emazingeni okushisa aphakeme, noma lapho isebenza nezinto ezingamanzi eziguquguqukayo. Isiphenduli se-electrochemical esivalwe ngokuqinile singasebenza ekucindezelweni ngenhla noma ngaphansi kwengcindezi ye-ambient. Uphawu phakathi kwe-electrode ye-ultrasonic kanye nesiphenduli singenziwa sisebenze ngogesi noma sivikele. Lesi sakamuva sivumela ukuthi kusetshenziswe izindonga zokuphendula njenge-electrode yesibili. Vele, ophendulayo angaba namachweba wokungena nawokungena ukuze asebenze njenge-flow cell reactor yezinqubo eziqhubekayo. I-Hielscher Ultrasonics inikeza ama-reactors afanayo ahlukahlukene namaseli okugeleza ajwayelekile. Ngenye indlela, ungakhetha kusuka kububanzi be-adapters ukuze ulingane ne-Hielscher sonotrode kwisiphenduli sakho se-electrochemical.
Ukuhlelwa okugxilile kusiphenduli sepayipi
Uma i-electrode ekhungathekile i-ultrasonically iseduze ne-electrode yesibili engashisi noma eduze nodonga lwe-reactor, amagagasi e-ultrasonic asakazeka ketshezi futhi amagagasi e-ultrasound azosebenza nakwezinye izindawo. I-electrode ekhungathekile ene-ultrasonically egxile kakhulu epayipini noma ku-reactor ingagcina izindonga zangaphakathi zingenakho ukungcola noma okokuqina okuqoqiwe.
Lapho usebenzisa i-sonotrode ejwayelekile ye-Hielscher njengama-electrode, izinga lokushisa le-electrolyte lingaba phakathi kuka-0 no-80 degree Celsius. I-Sonotrodes yamanye amazinga okushisa e-electrolyte ebangeni kusuka ku-273 degree Celsius kuye ku-500 degree Celsius ayatholakala uma ucelwa. Ukuhlanganiswa kwe-ultrasound nokushisa kubizwa nge-thermo-sonication.
Uma i-viscosity ye-electrolyte ivimbela ukudluliswa kwesisindo, ukuxubana kokuxubana kwe-ultrasonic ngesikhathi se-electrolysis kungaba lusizo njengoba kuthuthukisa ukudluliswa kwento kuye nokubuya kuma-electrode.
I-Sono-Electrolysis ene-Pulsating yamanje
Ukudonswa kwamanje kuma-electrode akhungathekile e-ultrasonically kuholela emikhiqizweni ehlukile kunamanje eqondile (DC). Isibonelo, ukudonswa kwamanje kungakhuphula isilinganiso se-ozone neoksijini esikhiqizwe ku-anode ku-electrolysis yesisombululo se-aqueous acidic, isb. Dilute sulfuric acid. I-electrolysis yamanje ye-ethanol ekhiqizwa ngamandla ikhiqiza i-aldehyde esikhundleni se-asidi ngokuyinhloko.
Izinsiza kusebenza ze-Electro-Sonication
I-Hielscher Ultrasonics yathuthukisa i-isolator ekhethekile kagesi. Le mibhangqwana ehlukanisayo inyakazisa imishini kusuka ku-UIP-transducer ejwayelekile kuye cishe kuzo zonke izinhlobo zama-sonotrode we-Hielscher.
Ama-Ultrasonic Electrode (i-Sonotrode)
Ama-sonotrode ahlukaniswe ngogesi kwi-generator ye-ultrasonic kanye ne-transducer. Ngakho-ke, ungaxhuma i-sonotrode ye-ultrasonic kumandla kagesi, ukuze i-sonotrode isebenze njenge-electrode. Igebe elijwayelekile lokuhlukaniswa kagesi phakathi kwe-sonotrode nophondo lwe-transducer ngu-2.5 mm. Ngakho-ke ungafaka ama-volts angama-2500 ku-sonotrode. Ama-sonotrode ajwayelekile aqinile futhi enziwe ngeTitanium. Ngakho-ke, cishe akukho mkhawulo kumanje we-electrode. I-Titanium ikhombisa ukumelana nokugqwala okuhle kuma-alkaline amaningi noma ama-electrolyte ane-asidi. Ezinye izinto ze-sonotrode, njenge-aluminium (Al), insimbi (Fe), insimbi engagqwali, i-nickel-chromium-molybdenum, noma i-niobium kungenzeka. I-Hielscher inikeza ama-sonotrode we-anode angabizi kakhulu, isb. Enziwe nge-aluminium noma ngensimbi.
I-Ultrasonic Generator, Ukunikezwa Kwamandla
I-generator ye-ultrasonic ayidingi ukuguqulwa futhi isebenzisa indawo ejwayelekile kagesi enomhlabathi. Uphondo lwe-transducer nazo zonke izingaphandle zangaphandle ze-transducer ne-generator zixhunywe phansi kuphuma ugesi, kunjalo. I-sonotrode ne-bracing element yizona kuphela izingxenye ezixhunywe kumbane we-electrode. Lokhu kusiza ukwakheka kokusetha. Ungaxhuma i-sonotrode ukuze iqondise i-current (DC), ishaye i-current yamanje noma i-current eshintshanayo (AC). Ama-electrode e-Ultrasonic angaqhutshwa njengama-anode noma ama-cathode, ngokulandelana.
Izinsiza Zokukhiqiza zezinqubo ze-Electro-Sonication
Ungasebenzisa noma iyiphi idivayisi ye-Hielscher ultrasonic, njenge-UIP500hdT, UIP1000hdT, UIP1500hdT, UIP2000hdT noma i-UIP4000hdT ukubhangqa ama-watts angama-4000 wamandla we-ultrasonic kunoma iyiphi i-sonotrode ejwayelekile noma i-cascatrode. Ukuqina kobuso be-Ultrasonic ebusweni be-sonotrode kungaba phakathi kwe-1 watt kuye ku-100 watts watt ngesikwele-sentimitha ngasinye. Ama-geometri e-sonotrode ahlukene ane-amplitudes kusuka ku-1 micron kuya ku-150 micron (peak-peak) ayatholakala. Imvamisa ye-ultrasonic ye-20kHz isebenza kahle kakhulu ekukhiqizeni i-cavitation nokusakazwa kwe-acoustic ku-electrolyte. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic angasebenza amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Ungasebenza ngokuqhubekayo ngokukhipha amandla okugcwele noma nge-pulsate, isb. Ukuhlanzwa ngezikhathi kwama-electrode. I-Hielscher Ultrasonics inganikezela ngama-electrode e-ultrasonic ngamandla afinyelela kuma-kilowatts ayi-16 e-ultrasonic (ukuthuthumela kwemishini) nge-electrode eyodwa. Cishe awukho umkhawulo emandleni kagesi ongawaxhuma kuma-electrode.
Sicela usebenzise leli fomu elingezansi, uma ufisa ukucela imininingwane eyengeziwe maqondana nokusetshenziswa kwama-electrode e-ultrasonic. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho.
Enye into futhi: Sono-Electrostatic sishaye
I-Hielscher Ultrasonics yenza imishini yokufafaza, i-nebulizing, i-atomizing noma i-aerosolyzing yeziphuzo. I-sonotrode yokufafaza ye-ultrasonic inganikeza inkungu ketshezi noma ama-aerosols icala elihle. Lokhu kuhlanganisa ukufafaza kwe-ultrasonic nobuchwepheshe bokufafaza i-electrostatic, isib.